Alahady Paka – 05/04/2015 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady Paka – 05/04/2015 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 10, 34a. 37- 43)
Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay rehefa tafatsangan-ko velona Izy.
Nony tonga tao Sezarea i Piera tao an-tranon’i Kôrnely, dia niloa-bava hoe: « Fantatrareo ny zavatra tanteraka eran’i Jodea manontolo, nanomboka tany Galilea taorian’ny batemy notorian’i Joany: dia ny amin’i Jesoa avy any Nazareta, izay nohosoran’Andriamanitra tamin’ny Fanahy Masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soa hatraiza hatraiza, nahasitrana izay rehetra azon’ny demony, satria nomba Azy Andriamanitra. Ary izahay no vavolombelon’ny zavatra rehetra nataony tany amin’ny tanin’ny Jody sy tany Jerosalema. Dia novonoiny Izy nahantony tamin’ny hazo; nefa natsangan’Andriamanitra kosa Izy tamin’ny andro fahatelo, sady nasehony miharihary, tsy tamin’ny olona rehetra, fa tamin’ny vavolombelona efa voatendrin’Andriamanitra rahateo, dia taminay, izay niara-nihinanan sy nisotro taminy; rehefa nitsangan-ko velona Izy. Izy nandidy anay hitory amin’ny vahoaka sy hanambara fa Izy no voatendrin’Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Ny mpaminany rehetra koa manambara fa amin’ny Anarany no ahazoan’izay rehetra mino Azy famelan-keloka. »
Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôlôsy (Kôl 3, 1- 4)
Ny zavatra any ambony, any amin’izay itoeran’i Kristy no katsaho.
Ry kristianina havana, raha niara-nitsangana tamin’i Kristy ianareo, dia ny zavatra any ambony, amin’izay itoeran’i Kristy eo an-kavanan’Andriamanitra no katsaho: ny zavatra any ambony no ankafizo, fa aza ny zavatry ny tany. Fa maty ianareo, ary miara-miafina amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra ny fiainanareo; fa rehefa hiseho i Kristy izay fiainantsika, vao hiara-miseho aminy amim-boninahitra koa ianareo.
Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Joany (Jo 20, 1- 9)
Nitsangan-ko velona i Jesoa.
Tamin’ny andro voalohan’ny herinandro, dia lasa marainakoa mbola maizina nankany amin’ny fasana i Madelenina, ka nahita fa voaesotra tamin’ny fasana ny vato.Dia lasa izy nihazakazaka nankany amin’i Simôna Piera sy ilay mpianatra malalan’i Jesoa, ka nanao tamin’ireo hoe: « Nalain’olona tao am-pasana ny Tompo, ka tsy fantatray izay nametrahany azy ». Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin’ny fasana, ka niara-nihazakazaka izy roa lahy, saingy nandeha faingampaingana kokoa ilay mpianatra anankiray, ka tonga talohan’i Piera tao amin’ny fasana. Dia niondrika izy, ka nahita ny lamba nipetraka teo, nefa tsy niditra. Nony tonga kosa i Piera nanarakaraka azy, dia niditra teo am-pasana ka nahita ny lamba nipetraka teo, sy ny lamba nasarona ny lohany, tsy niara-nipetraka tamin’ny lamba fa nivalona nitokana terý. Dia niditra koa ilay mpianatra izay tonga taloha teo amin’ny fasana, ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantatr’izy ireo ny Soratra Masina milaza fa tsy maintsy hitsangan-ko velona i Jesoa.